ကဗျာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ကဗျာ. Show all posts
၁။ စာအုပ်ကယ်မှ ကလောင်လေ
မင်းမင့်နောင်ညီ . . .။
ငါ ...ဇာနည်ကို လာပြီကြိုကြ
နှမငယ်မှ ဖြူဖြူ . . .
ရှေးဘဝက၊ နှမတို့နှယ် . . .
ငါ့မိ ငါ့ဘ၊ ကျွန်ဘဝကို
ကြိုးစားရာတွင်၊ ကြမ္မာငါ့ကံ ...။
ဆက်ကာ ဆက်ကာ . . .။
ကွာသတိနှင့် . . .။
သိန်း သောင်း သန်းကျော်
(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ နှစ်ငါးဆယ် စာစောင်မှ)
ဗိုလ်အောင်ကျော် ၁၂၇၇၊ တပို့တွဲ လပြည့်ကျော် ၉ ရက်။ ၁၉၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ အဖ ဦးကျော်ထင်၊ အမိ ဒေါ်ရွှေကျော် တို့က ဟင်္သာတ ခရိုင် အင်္ဂပူ မြို့နယ် မယ်ဇလီကုန်း ဒေသ ရုံးဇင်ရွာ ဖွားပြီး မယ်ဇလီကုန်းရွာ အမျိုးသား ကျောင်းက ၁၉၃၁ မှာ သတ္တမတန်း အောင်။ ဆယ်တန်း ကို ဟင်္သာတမြို့ ကမ္မင်း အထက်တန်း ကျောင်းက အောင်ပြီး ၁၉၃၅ မှာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကို ရောက် ပါတယ်။
၁၉၃၇-၃၈ အိုင်အေ ဒုတိယနှစ် (ဥပစာတန်း ဒုတိယ နှစ်) တက်ဆဲ ၁၉၃၈ ကျောင်းသား သပိတ်မှာ ဂေါ်ရာ ပုလိပ်များက နံပါတ်တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်လို့ ကျဆုံး ခဲ့ရတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဂျပ်ဆင် ကောလိပ်မှာ ယုဒဿန် မြန်မာ အသင်းကြီးရဲ့ အမှုဆောင်၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှာ အမှုဆောင်။ တစ်ဖက် ကလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကြီးပွားရေး ဦးလှ (နောင်လူထုဦးလှ)ရဲ့ အခမဲ့ ညကျောင်း မှာလည်း ကူညီ စာပြ ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
၁၉၃၈ မှာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှာ ကိုအောင်ဆန်းက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်က ထွက်ပြီး တို့ဗမာ အစည်းအရုံး ‘သခင်’ဖြစ်သွားလို့ ကိုဗဟိန်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာတယ်။ အတွင်းရေးမှူးက ကိုဗဆွေ။ သူတို့နှစ်ဦး ရေနံမြေ သပိတ်မှာ အမျိုးသားရေး ကိစ္စ အဖြစ် ပါဝင် ဟောပြောလို့ အဖမ်း ခံရတယ်။
သမဂ္ဂဦးဆောင်ပြီး အတွင်းဝန်ရုံးကို ဝိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြပြီး ကိုဗဟိန်း၊ ကိုဗဆွေတို့ လွတ်ဖို့ တောင်းဆိုတယ်။
၁၉၃၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် နေ့မှာ ဗိုလ်အောင်ကျော် ဂေါ်ရာ ပုလိပ်များရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံး ခဲ့တယ်။ သူကျဆုံးတဲ့နေ့ကို ‘မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားများနေ့’ လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်ဟာ ၁၉၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွား ပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းထက် တစ်နှစ် ငယ်ပါတယ်။ မနှစ်က ‘အောင်ဆန်း ရာပြည့်’ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီနှစ်ဟာ ဗိုလ်အောင်ကျော် ရာပြည့်ပါ။ အမှတ်တရ အဖြစ် ကဗျာ စာဆိုကြီး မင်းသုဝဏ် ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့‘ဗိုလ်အောင်ကျော် နတ်သံ’ ကဗျာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
By - မောင်စွမ်းရည်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/58487
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, February 20, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ကဗျာ, ဆောင်းပါး
မိခင်များနေ့(Mother”s Day) ဆုတောင်း
ယနေ့ကျရောက်တဲ့ မိခင်များနေ့(Mother’s Day) ရောက်ခါနီးမှာ မိခင်ကွယ်လွန်သွားရှာကြတဲ့ တူလေး တူမလေးအပါအ၀င် မိခင်မဲ့သွားကြရရှာသော ကျန်ရစ်သော သားသမီးများအတွက် အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်း
ထို့ အတူ နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွင်းမှာ မိခင်မဲ့သွားခဲ့ရရှာသော သားသမီးအပေါင်းတိုအား ပြန်လည်စာနာမှုနဲ့
အတူ၊ ယခု နောက်နောင် ကျရောက်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကင်းဝေးပြီး မိသားစုအပေါင်း ဥ
မကွဲ သိုက်မပျက်ဘဲ အတူတစ်ကွ နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။
မိခင်များနေ့ဆုတောင်း
ကြောက်မက်ဖွယ် နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့သဘ၀ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ဝေးကွာသွားခဲ့ကြရတဲ့ မိခင်များနဲ့ သားသမီးများအတွက် မိခင်များနေ့ မှာ -
ယုတ်မာသူ ရမ်းကားသူ အာဏာရူးအုပ်စုရဲ့မတရားဖိနှပ်ညဉ်းပမ်းအုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ရှင်ကွဲကွဲ သေကွဲ
ကွဲကြရတဲ့ မိခင်များနဲ့သားသမီးများအတွက် မိခင်များနေ့ မှာ -
အကြပ်အတည်းမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ ခေတ်စနစ်ဆိုးအောက်မှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ရုန်းကန်ဖြတ်
သန်းလှုပ်ရှားနေကြလို့ဝေးကွာနေကြရတဲ့ မိခင်များနဲ့သားသမီးများအတွက် မိခင်များနေ့ မှာ -
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် လွှတ်ပြီး ခိုင်မာသော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် အခက်အခဲမှန်သမျှ အချုပ်အနှောင်မှန်သမျှ ညဉ်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှုမှန်သမျှ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေကြပြီး ဝေးကွာနေကြရတဲ့ မိခင်
များ သားသမီးများအတွက် မိခင်များနေ့ မှာ -
အမိမြန်မာပြည်နှင့် အခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေခြားမြေခြားဒေသများသို့ရောက်ရှိကာ
ဝေးကွာနေကြရသော မိခင်များ သားသမီးများအတွက် မိခင်များနေ့ မှာ - ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားတတ်
ကြမယ်ဆိုရင် - နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း မိခင်များနေ့ အဖြစ် အောက်မေ့အသိအမှတ်ပြုကြပြီး -
မြန်မာပြည်က မိခင်တွေ ဘ၀အခြေအနေကို ဘယ်လို စောင့်ရှောက်ကူညီသင့်ကြသလည်း။
"မိခင်တွေ ဘ၀ကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးကြပါ။"
"မိခင်တွေကို လေးစားသမှု ပြုကြပါ။"
"မိခင်တွေ ပညာရေးအဆင့်အတန်း လူနေမှုအဆင့်အတန်း ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။"
(မေလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် - မိခင်များနေ့Mother’s Day)။
from Burma ( The Power of People) by Niknayman
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, May 12, 2013
ဟပ်ချိုး ဆိတ်ဖွား အသက်တစ်ရာ အနာမရှိ
ခေတ်သစ် သင်ပုန်းကြီး (၃၂)
နိုင်ငံအတွင်းမှာ ခေတ်စားသည်က ပြဿနာ။
ကော်မရှင် ရှင်းသည်က ထုတ်ပြန်ချက်။
အစီရင်ခံစာဟူသည် လွယ်လွယ်နှင့် မထွက်။
ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာဖြစ်သဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုရန်တဲ့။
ထိုင်းသွားပြီး ငွေကုန်လူနွမ်း ဒုက္ခထမ်းသံဃာများအကြောင်း မပါ
သက်သာပြီး ဆေးရုံက ဆင်းသည့် သံဃာများအကြောင်းသာ
ကော်မရှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ မြန်မာနယ်နိမိတ်ကို ကျော်ဟန်မတူ
နောင်တော့်နောင်တော် ကော်မရှင်များ၏ ခြေရာအား
ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါစွာဖြင့် မိုဟာ(MOHA ministry of home affairs) နံ့သင်းသင်း
သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် မဆလ၊ နအဖနံ့မကင်းမကင်း အစီရင်ခံစာတို့အား
နိုင်ငံသားများက အံ့ကြီးပင် အောကြကုန်၏။
ဟပ်ချိုး ဆိတ်ဖွား အသက်တစ်ရာ အနာမရှိဆိုသော်လည်း
ဆိတ်ဖွားခင်မျာ ကော်မရှင်ဖွဲ့၍ပင် ထောက်လှမ်းခံနေရ
ဥပဒေအထက်မှာ မည်သူမျှ မရှိဆိုသော်လည်း
ကော်မရှင်ဖွဲ့ အရေးယူခွင့်က ရှိနေရာ
အွန်လိုင်းပင် သုံးလေ့မရှိသော ခေါင်းပေါင်းတော်များက
မောင်စံရှားမှန်ဘီလူး ငှားကူပြီး ရှာလေတော့မည်။
အသင် ဆိတ်ဖွား သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေသတည်း။
စီမံကိန်းတကာက တစ်ပတ်နွမ်းရော ဖုတ်ပူမီးတိုက်ပါ ပေါများ
လှုပ်ရှားသူက ကယ်တင်ရှင်ရှာသူကို ရှာ
ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်း ရှာ
အဖြေက အချည်းအနှီး ဖြစ်မှာစိုး
ခပ်ရိုးရိုးသာလျှင် ခံစားနိုင်ကြပါစေ။ ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, February 14, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ ကဗျာ, သရော်စာ
၂၀၁၂ နှစ်သစ် ဆုမွန် - သျှီ
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, April 11, 2012 No comments:
Naing Oo Nyo (Phoe Zero) - Poem
ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၂
(တချို့တွေက တွေးတယ် ... အရိုင်းစကားမပြောစမ်းနဲ့
တိုင်းတပါးမှာ မင်း ရှင်ဘုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး … တဲ့)
ရှင်ဘုရင်ဖြစ် မင်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ...။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, April 04, 2012 No comments:
မပျက်တဲ့အပြင် တို့လုပ်အမျှ အဖျက်တရား
ပိဿာ ၆ဝဝ အလကားဖြစ်တဲ့အပြင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 07, 2012 1 comment:
အမေစုနဲ့ နေပြည်တော်သားများ (ဓာတ်ပုံ Getty Images)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 07, 2012 No comments: